Andriamalazaray Andoniaina: “Mampihemotra ny demokrasia ny satan’ny mpanohitra” | NewsMada
Andriamalazaray Andoniaina: “Mampihemotra ny demokrasia ny satan’ny mpanohitra”
“Mahita izahay fa mampihemotra ny demokrasia ny zavatra toy ireny. Satria tsy ny solombavambahoaka irery no antsoina hoe olom-boafidy eto amin’ny tany sy ny firenena, raha tsy maintsy ao anatin’ny Antenimierampirenena no ahitana ny lehiben’ny mpanohitra.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, Andriamalazaray Andoniaina, manoloana ny fahalanian’ny tolo-dalàna nanitsiana ny lalàna mifehy ny satan’ny mpanohitra sy ny antoko politika.
Afa-manao politika ny olom-pirenena tsirairay avy, afaka manohitra ary mahazo tsy manao solombavambahoaka fa mirotsaka ho ben’ny Tanàna, ohatra. Tsy mety ve izany? Tsy hoe tsy mankasitraka ny hoe tsy maintsy olom-boafidy no lehiben’ny mpanohitra ry zareo, fa ny hoe tsy maintsy solombavambahoaka ny lehiben’ny mpanohitra. Ny olana: mifantoka amina olon-tokana ny adihevitra ny amin’ny fanoherana.
Mila miaraka ny ara-dalàna sy ny ara-drariny
Koa ahoana raha mirotsa-kofidina, ohatra, ny olona, mety manohintohina ny besinimaro? Tsy mirotsa-kofidina izy, nefa mahazaka vahoaka maromaro ihany ary mijoro ho mpanohitra. Tsy mirotsa-kofidina any amin’ny sehatra hafa izay mety hahalany azy izy amin’izany: voafidy raha mirotsaka ho solombavambahoaka, ohatra. Tsy mahaliana azy ny amin’izany fa ny hofidina ho filohan’ny Repoblika, ohatra, no tiany. Koa rehefa tsy voafidy amin’izany izy dia hanohitra ny filohan’ny Repoblika: hosakanana ve izany izay zony izay?
Ny tsy tokony hohadinoina: aiza ho aiza i Madagasikara amin’ny hoe ara-dalàna sy ny fampiharana izay ara-dalàna izay, antsoina hoe ara-drariny? Raha vao tsy miaraka ny ara-dalàna sy ny ara-drariny, azo amboarina amin’izay tiana hanaovana azy ny lalàna. Saingy tsy atao mahagaga raha tsy mifampitohy araka ny tokony ho izy izay ara-dalàna sy ara-drariny izay.